के रविहरुलाई नेपाली रहिरहने नैसर्गिक अधिकार छैन ? - JanaSanchar.com
(२०७५ असार ८, शुक्रबार)
गृह मन्त्रालय, काठमाडौ ।
गृहमन्त्री ज्यु ! म पनि देश निकालामा परेको रवि हुँ । भलै मलाई पृथीछक नामले बोलाइन्छ । रवि र मेरो नियतिमा केही फरक छैन । यो देशमा कति जना रवि लामिछानेहरुलाई अझै देश निकाला गरिने छ ? कति जना देश निकालामा परेका युवाहरु रातो बाकसमा फर्किए । देशबाट निकालिदै गरिएका कतिजना युवाहरु अहिले त्रिभुवन बिमानस्थलमा लाम लागेर उभिएका होलान् ? भबिस्यमा देश निकालामा आफ्नो नाम दर्ज गराउनेहरु मध्ये कतिपय अहिले आमाको गर्भमै सल्बलाउदै होलान् ? यो प्रकृया कहिलेसम्म ? यो सिलसिला कहिलेसम्म गृहमन्त्री ज्यु ?
यो देशले रबि लामिछानेहरुलाई कहिलै चिनेन । देश निकाला गरिएका लाखौं लाख रविहरुलाई यो देशले कहिले स्वदेश फिर्ताको बाताबरण तयार गर्छ ? स्वदेशमा केही गर्छु भनि संकल्प लिएकाहरुलाई पनि यस्तो निरुत्साहित कहिलेसम्म ? के यो देशमा बस्ने अधिकार रबि लामिछानेहरुलाई छैन ? के यो देश रविहरुको देश होइन ? के रविहरुलाई नेपाली रहिरहने नैसर्गिक अधिकार छैन ?
मैले शुरूवातमै भने, म पनि रवि हुँ । भलै रवि अमेरिका भासियो । म पनि खाडी भासिएको डेढ दशक भयो । रविले उता पिआर पाए । नमिल्ने भएर हो, नत्र मैले पनि अरबमा के के पाइसकेको हुन्थे । त्यो हाम्रो बाध्यता हो ।
यो देशमा कानुनी राज छैन । सुशासन छैन । अमनचयन छैन । चालीस लाख रविहरुलाई यो देशको सरकारले देश निकाला गरेको छ । के मैले बिदेशको सम्पुर्ण मोह त्यागेर नेपाली भएर नेपाल राष्ट्रको लागि केही गर्छु भनेर भन्न पाउदैन ? मसंग भएको बिदेशी पासपोर्ट र पिआर फिर्ता गरेर, म नेपाली हुँ भनेर भन्न पनि पाउदैन ?
कम्युनिस्टहरुले आफुलाई अन्तर्राष्ट्रियवादी ठान्दछन् । त्यहि अन्तर्राष्ट्रियवादीहरुको सरकारले एउटा श्रमजीवी पत्रकारलाई जेल हाल्न खोजिरहेको छ । भनिएको छ, रविले कानुन मिच्यो । कहाँनेर मिच्यो ? कसरी मिच्यो ? कानुनका धाराहरु मलाई थाहा छैन । मलाई यति मात्रै थाहा छ कि रविले ठिक कदम चालिरहेको छ । उसले अबोलहरुको आवाज बनेर बोलिरहेको छ । अबोधहरुको शक्ति भनेर उभिएको छ ।
दलालहरुले हाम्रा चेलीबेटीहरु अरवका कोठीहरुमा बेचिरहदा यो देशको कानुनले के गरिरहेको थियो ? म्यानपावरहरुले फ्री भिसा, फ्री टिकट भनेर लाखौं लाख असुलीरहेको दृश्य यो राज्यले देखिरहेको छ कि छैन ? `घुस लिन्या र दिन्या दुबै अपराधी हुन्´ भनेर लेखिएको साईनबोर्ड झुन्डिरहेको सरकारी कार्यालयमा खुलमखुल्ला घुसको लेनदेन चलिरहेको बेला यो देशको कानुन कहाँ निदाएको थियो ?
दुरदराजमा बोक्सिको आरोपमा दिनदहाडै चेलीबेटी कुटिदा तपाईंको देशको कानुन कहाँ हराएको थियो ? नाफाखोरहरुले निर्माण गरेको कालोपत्रे सडक एक हप्ता नपुग्दै खाल्डो पर्न थालिहाल्छ । के यी दृश्यहरुलाई कानुनले देख्दैन ? कि हाम्रो लागि दृष्टिबिहिन हो यो कानुन ?
हो, रविले सरकार नपुगेको ठाउँमा पुगेको मात्रै हो । सरकारले बोल्न नसकेको ठाउँमा बोलेको मात्रै हो ।
रविलाई कसै-कसैले आरोप लगाएका छन् कि उ वकिल जस्तो बन्यो । कहिले उ पुलिस जस्तो बन्यो । कहिले उ न्यायाधीश जस्तो बन्यो ।
मलाई थाहा भएको चाहिँ के हो भने, यदि कुनै पनि निकायले आफ्नो काम कर्तव्यलाई सहि ढंगले ब्यबस्थापन गर्नमा चुक्यो भने जनता आफै सेना बन्छ, जनता आफै पुलिस बन्छ, जनता आफै वलिक बन्छ र जनता आफै न्यायाधीस बन्छ । कुनै बेला तपाईंहरुको नेतृत्वमा जनताको आफ्नै सेना, आफ्नै वकिल, आफ्नै न्यायाधीश र आफ्नै बैकल्पिक जनसत्ताको अभ्यास गर्नु भएको थिएन ?
यदि देशको सरकार र कानुन जनता प्रति उत्तरदायी हुने हो भने यी कुराहरुको आबस्यक पक्कै हुने थिएन, आज रविले खबरदारी गरिरहनु पर्ने थिएन ।
पत्रकार देशको चौथो अंग हो । देशकै महत्वपूर्ण अंग भएकाले आफ्नै अगाडी देश र नागरिकहरूको विरुद्धमा हुने गतिविधिलाई कुनै पनि जिम्मेवारी पत्रकारले टुलुटुलु हेरिरहन सक्दैन । रविले त्यहि गरेका थिए ।
के यस्तो गर्नु उसको गल्ति हो ? अन्याय गर्नु हुँदैन । जनता र उपभोक्ता ठग्नु हुँदैन भनेर बोल्नु गलत थियो ? लुकेर गरिने गतिविधिहरुलाई जनताको सामु छर्लङ्ग पारेर देखाईदिनु रविको कसुर हो ?
गृहमन्त्री ज्यु, सर्बप्रथम ती परजीवीहरुलाई यो देशको कानुनले ठेगान लगाओस् । रवि आफै ठेगान लाग्ने छ । टाउको दुखाउनै पर्दैन । जब परजीवीहरु निस्तेज हुनेछन रबि आफै निस्तेज हुनेछ।
भनिन्छ, रवि लामिछाने बिदेशी हो । उसङ्ग पिआर र पासपोर्ट छ । बिदेशीले नेपालको मामिलामा बोल्नु हुँदैन ।
अब मलाई बनाउनुहोस्, अमेरिकी पिआर बोकेका तिनै नेपाली सांसदहरुले रोष्ट्रममा पिआर बोक्नु पाउनुपर्छ भनेर माग राख्नेहरुलाई के सजाय हुन्छ ? पटक-पटक मन्त्री समेत भएका पिआर धारीहरुको बिषयमा कानुनले के बोल्यो ? सरकारले पक्राउ गर्छ कि गर्दैन ? कति बर्ष कैद गर्छ ?
यदि होइन भने बिदेशी पिआर र पासपोर्ट फिर्ता गरेर नेपाल र नेपालीको लागि आजिवन सेवा गर्छु भनेर स्वदेश फर्किएका रबि लामिछानेको लागि किन यति ठूलो आपत्ति भयो ? कहिलेसम्म यो देशले रबि लामिछानेहरुलाई खेदिरहन्छ ? कहिलेसम्म यो देशले रबि लामिछानेहरुलाई देश निकाला गरिररहन्छ ?
गृहमन्त्री ज्यु, म पनि रबि लामिछाने हुँ । म पनि देश भित्रका परजीवीहरुलाई सखाप पार्न चाहन्छु । त्यो बापत यो देशको कानुनले मलाई कति बर्ष कैद गर्छ ? गृहमन्त्री ज्यु, जवाफ चाहन्छु ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको (२०७५ असार ८, शुक्रबार) 1033 Viewed